Gaas, Xaaf & Madoobe: “Reer Gaalkacyo is Nabadgeliya oo Yeesha Xiriir aan Dhammaad Lahayn” – Radio Daljir
Gaas, Xaaf & Madoobe: “Reer Gaalkacyo is Nabadgeliya oo Yeesha Xiriir aan Dhammaad Lahayn”
May 31, 2017 1:40 b 0
Madaxweynayaasha Puntland, Galmudug iyo Jubbaland oo baaq nabadeed ka soo saaray Cadaado.
Cadaado – Madaxweynayaasha maamulada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland ayaa maanta baaq nabadeed oo wadajir ah ka soo saaray magaalada Cadaado oo ah xarunta maamulka Galmudug, baaqaasi oo ku wajahnaa dadka wadda deggan gobolka Mudug iyo nabad ku wada noolaanshahooda.
Madaxweynayaashaan baaqa nabadeed soosaaray oo kala ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa baaqooda nabadeed uga hadlay arrimo mugleh oo quseeya nabadda, siiba wada noolaansho xasilooni iyo nabadgalyo ku dhisan iyo wadaagidda xiriir walaaltinomo oo labada dhinaca ah waa Puntland iyo Galmudug e.
Baaqooda ayaa yimid kadib markii maanta ay kormeero ku tageen saddexda madaxweyne meelo muhiim ah oo ka mid ah magaalada Cadaado, iyagoo socod lug ah ku marayey Cadaado dhaxdeeda, taasoo kadibna keentay in ay si wadajir ah u qabtaan shir jaraa’id, kagana dhawaaqaan baaq nabadeed oo lagu dalbanayo dadka walaalaha ah ee deggan gobolka Mudug, siiba magaalada Galkacyo in ay noqdaan kuwo is nabadgeliya, yeeshana xiriir aan dhammaad lahayn oo siyaasadda iyo midka bulshaba iskugu jira.
Labada madaxweyne ee Puntland iyo Galmudug ayaa amray in la joojiyo waxkasta oo colaad horseedi kara, iyagoo dhinaca kalena faray dhinacyada amniga dhigista qoriga iyo dhawrista nabadgalyada dadka iyo deegaannada lagu wada noolyahayba.
Haddaba hoos ka dhegaysta hadalladii shirka jaraa’id ay ka wada jeediyeen madaxweynayaasha Puntland, Galmudug iyo Jubbaland
Dhegayso hadalka madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Dhegayso hadalka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Dhegayso hadalka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe.